Iindaba - Uyintoni umahluko kumboniso we-LED, i-LCD, iProjektha kunye ne-DLP?
Uthini umahluko kumboniso we-LED, i-LCD, iProjektha kunye ne-DLP?
I-LED "kukuKhanya okuKhanya ngokuKhanya", eyona yunithi incinci yi-8.5 intshi, inokugcina ipikseli kunye nokutshintsha kwemodyuli yeyunithi, ixesha lokuphila kwe-LED ngaphezulu kweeyure eziyi-100,000.
I-DLP "yinkqubo yokuKhanya kweDigital" ubungakanani malunga ne-50inch ~ 100inch, ixesha lobomi malunga neeyure ezingama-8000. kufuneka ubuyisele kwindawo ethengisa yonke into ukuba ibhalbhu yeprojekthi kunye nepaneli zinengxaki.
1. Ukuziqhelanisa nokusingqongileyo kokuqaqamba
Ukuqaqamba kwesibonisi se-DLP \_ LCD akuphezulu. Ukuqaqamba okumiselweyo kulinganiselwe ngokungqongqo, kungafanelekanga iofisi yokuqaqamba okuphezulu okanye indawo yolawulo kwigumbi.
Ukukhanya komboniso we-LED kunokuhlengahlengisa phakathi kwe-600-1500cd, isuti kwimeko-bume eyahlukeneyo.
2. Into ebonakalisayo
Umboniso weLCD, umphambili uxhotyiswe ngeplanethi ekhanyayo okanye ekhanyayo.
I-DLP kwisicelo esisebenzayo, iya kuba nefuthe elibonakalisayo.
I-LED kuba iyunithi yokukhanya okuzenzekelayo, kunye nepaneli emnyama emnyama matte, umphezulu wesibane esikhokelwe mnyama, ke imbonakalo yombala wayo nayiphi na i-engile inokugcinwa ihleli.
3. jonga i-engile
4. Ukubonisa ukusebenza ngokuthelekisa
5. thelekisa umahluko thelekisa
Ukusetyenziswa kwe-LED kwesibane esimnyama esikhokelwa, umphezulu wescreen ulwakhiwo lohlobo lokutsalwa. phantse akukho umgca othe tye ubonakalisa ukukhanya, ke umlinganiso we-screen screen umahluko ophakamileyo njenge-4000: 1, yenza isikrini sokubonisa i-LED sibukhali ngakumbi kwaye sicace.
Uninzi lweprojektha ye-DLP umahluko unokuba ngama-600: 1 kuye kuma-800: 1, amaxabiso asezantsi nawo angaba ngama-450: 1.
Udonga lwevidiyo yeDLP
I-DLP kwiimfuno zokusingqongileyo ziphezulu kakhulu, ezinje ngeqondo lobushushu, ukufuma, uthuli, ukukhanya, njl., Ngakumbi isikrini sesona sisemngciphekweni, ukukrwela umgca omncinci akunakucinywa kwaye kulungiswe, kunzima kakhulu ayilixesha ixesha liza kuphinda liyifunde kwakhona, ngaphandle koko umfanekiso uza kuwucima ngokuzenzekelayo. Umahluko wokwenyani we-DLP uphantsi kakhulu, ubonakaliswe kwindawo emnyama yokubonisa iziphene, oko kukuthi, imifanekiso emininzi yemifanekiso emnyama ayicacanga, le nto icace gca. Njengokuba incwadi yamanqaku inokubona indawo emnyama, kwiscreen se-DLP emnyama, ayikwazi ukwahlula, ke xa isetyenziselwa ukubeka esweni imifanekiso, umgangatho womfanekiso uya kuncitshiswa kakhulu. Ubuthathaka beprojektha ye-DLP inye kuphela, oko kukuthi, "isiphumo somnyama", intsebenzo ethile yahlulwe nje ngombala obomvu, oluhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhaka i-monochrome emithathu, ijongeka njengemvula yomnyama.
Udonga lwevidiyo yeLCD
Ububi obucacileyo beprojektha yeLCD kukuba inqanaba elimnyama liphantsi kwaye umahluko awukho phezulu kakhulu. Umbala omnyama weprojektha yeLCD uhlala ubonakala ungwevu, kwaye icandelo elinombala umnyama kwaye ngaphandle kweenkcukacha Oku akulunganga kakhulu kwividiyo yokudlala, Ayilunganga kakhulu kumdlalo bhanyabhanya, kodwa ayisiyantlukwano enkulu kunye neprojektha ye-DLP xa udlala amagama.Isiphene sesibini kukuba isiphumo seprojektha yeLCD sibonisa ulwakhiwo lwepikseli, kwaye umbukeli ubonakala ejonga umfanekiso ngothotho . Ifomathi ye-SVGA (800 x 600) yeprojektha yeLCD, nokuba ibungakanani bomfanekiso wesikrini, inokubonwa ngokucacileyo kwigridi ye-pixel ngaphandle kokuba kusetyenziswa imveliso enesisombululo esiphezulu. I-LCD ngoku iqale ukusebenzisa uluhlu lwee-lens ezincinci (MLA), inokuphucula ukuhanjiswa kwefomathi ye-XGA yeepaneli ze-LCD, ukusasazwa kweepikseli, i-pixel grid engacacanga, kwaye ubukhali bemifanekiso abuyi kuzisa mpembelelo. Inokunciphisa ipikseli yeLCD phantse ngokufana neprojektha zeDLP, kodwa isithuba esincinci.
Uncedo lwe-HD ye-HD
1. Ngaphezulu kweeyure ezili-100,000 zobomi
Ukusebenza kombala we-3
2.Superior ukusebenza ukusasaza ubushushu
Iindleko zokugcina ezi-4
1.Ngaphezulu kweeyure ezili-10 000 zexesha lobomi
Umhlaba oqaqambileyo udityanisiwe, ubume beplate yealuminium, Umzimba wonke wokufudumeza ubushushu, unokuba yeyona ndawo iphambili yokushisa ；
Ubushushu kwiphrofayili yobushushu ukusasaza kobushushu: Ubushushu ebhokisini busasazekile emacaleni, emva koko uqhagamshele iiphaneli, Kwigobolondo elingasemva kumacala omabini okwenziwa kweendlela ezingaphezulu nezisezantsi, ukusetyenziswa koxinzelelo lomoya ukwenza umoya ophezulu naphantsi Umgaqo wokujikeleza, ukutshabalalisa ubushushu ngokupheleleyo.
Umgaqo wokubonisa wokukhanya okuzenzekelayo kugcina ubunyani bombala, ukuthintela ukulahleka kombala kunye nokuphambuka okubangelwa zizinto kunye nendlela yokukhanya ekhanyayo kwitekhnoloji yokukhanyisa ukukhanya kunye nokuqikelela.
I-YWTLED Konke kwi-LED enye-iTV iyunithi yokukhanya okuzenzekelayo, enepaneli emnyama emnyama esezantsi, umphezulu wokukhanya omnyama, ukuze umbala wombala wayo nayiphi na i-engile ebonakalayo ugcine uhleli.
Iindleko zokugcina eziphantsi
Iyunithi esemgangathweni ye-LED, iphaneli yokubonisa yenziwe ngamacandelo amancinci; Iipixels zokubonisa zenziwe ngesibane se-LED.
Ukuba kukho inqaku le-necrotic, yitshintshe ngeyunithi yokulungisa kwaye ulungise isibane se-；
Ukuba ipaneli ibonakala ingenakufunyanwa, ipaneli encinci yokubonisa inokutshintshwa
Umzekelo, indawo yokubonisa engama-intshi ezingama-32 kuphela yi-4% yepaneli yemveli.
Eyona nto iphambili ngoku yi-46-intshi, 55-intshi, kunye neyunithi ye-intshi ezingama-60, enexabiso elisezantsi.
I-LED akukho mahluko emva kokulungiswa kweyunithi
Xa endaweni LED enye, ungakhetha isibane LED agcinwe kwimveliso. kunye nokulungiswa kwenqaku elinye elinokuthi lenziwe ukuyigcina ingaguquguquki ；
Xa ubuyisela imodyuli yeyunithi, imodyuli yonke kunye neepaneli zisetyenziselwa ukulungiswa kokungaguquguquki, ukuze ubushushu bombala kunye nokuqaqamba kuhambelane nemeko yangoku yesikrini seprojekthi.
Udonga lwevidiyo yeLCD Umahluko omkhulu emva kokulungiswa kweyunithi
Umbala weyunithi yokutshintsha kunye nokuqaqamba konke kuyimeko entsha, akukho kuncitshiswa, kuyunifomu kakhulu kwaye kuyakhanya ；
Kwaye ezinye iiyunithi zoqobo, emva kokusebenzisa ixesha elide, ukuqaqamba kwesithambiso kunye nescreen kunye nezinye izinto, ezinje ngokutshintsha komgubo wokukhanya, umbala kunye nokuqaqamba kuye kwehla kabukhali
Kukho umahluko obonakalayo kwiziphumo ezibonakalayo zonke.
Ixesha Post: Nov-07-2020